Dexchlorpheniramine (ဒက်စ်ကလိုဖီနိုင်းရမင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Dexchlorpheniramine (ဒက်စ်ကလိုဖီနိုင်းရမင်း)
Dexchlorpheniramine (ဒက်စ်ကလိုဖီနိုင်းရမင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Dexchlorpheniramine (ဒက်စ်ကလိုဖီနိုင်းရမင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Dexchlorpheniramine (ဒက်စ်ကလိုဖီနိုင်းရမင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Dexchlorpheniramineသည် Antihistamine ဖြစ်ပြီးအလက်ဂျီ၊ Hay Fever နှင့် အအေးမိခြင်းတို့အားသက်သာစေရန် အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းလက္ခဏာများတွင် အကွက်ထခြင်းမျက်ရည်ထခြင်း၊ မျက်လုံး နှာခေါင်းလည်ချောင်းအရေပြားယားယံခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်းနှင့် နှာချေခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။
Dexchlorpheniramineသည် အလက်ဂျီဖြစ်ချိန်တွင် ပေါ်လာတတ်သည့် တစ်ချို့သော သဘာဝပစ္စည်းဖြစ်သည့် Histamine အားတားမြစ်ပေးသည်။ ထို့အပြင် နောက်ထပ် သဘာဝပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သော Acetylcholine အားတားမြစ်ပြီး ခန္ဓါကိုယ်မှ အရည်များကိုခမ်းခြောက်စေကာမျက်ရည်ယိုခြင်းနှင့် နှာရည်ယိုခြင်းများကိုသက်သာစေပါသည်။
အအေးမိချောင်းဆိုးဆေးများသည် အသက် ၆ နှစ်အောက်ကလေးများတွင် အာနိသင်ရှိကြောင်းစိတ်ချရကြောင်းသက်သေပြမထားပါ။ ထို့ကြောင့် Dexchlorpheniramineအားအသက် ၆ နှစ်အောက်ကလေးများတွင် ဆရာဝန်မှမညွှန်ကြားပဲမသုံးပါနှင့်။ တစ်ချို့ဆေးထုတ်ကုန်များဖြစ်သည့် (ကြာရှည်အာနိသင်ပြသောဆေးပြား/ဆေးတောင့်များ) ကိုကလေး ၁၂ နှစ်အောက်တွင် မသုံးရပါ။ ဆေးထုတ်ကုန်အားစိတ်ချရမှုနှင့်ပါတ်သတ်၍ အသေးစိတ်အကြောင်း ဆရာဝန် သို့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကိုမေးပါ။
ဒီထုတ်ကုန်များသည် အအေးမိခြင်းအားကုသမပေးနိုင်ပါ။ ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလဲ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ပြင်းထန်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအားလျော့ချနိုင်ရန်အတွက် ဆေးပမာဏလမ်းညွှန်ချက်များကိုသေချာလိုက်နာပါ။ Dexchlorpheniramineအားကလေးအိပ်စေရန်မသုံးရပါ။ တခြားသောအအေးမိပျောက်ဆေးများအားDexchlorpheniramine နှင့်တွဲမပေးရပါ။ ထိုဆေးများတွင် တူညီသော ပါဝင်ပစ္စည်းများ ပါနေတတ်ပါသည်။ (ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုအပိုင်းတွင်ကြည့်ပါ) အအေးမိခြင်းချောင်းဆိုးခြင်းသက်သာစေရန် တခြားနည်းလမ်းများကို ဆရာဝန်အားမေးပါ။ (အရည်များများသောက်ခြင်း၊ စလိုင်းအား နှာခေါင်းထဲသို့ အစက်ချခြင်း၊ humidifier သုံးခြင်း)
Dexchlorpheniramine (ဒက်စ်ကလိုဖီနိုင်းရမင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Dexchlorpheniramineအစာနှင့်တွဲလျက်ဖြစ်စေအစာမပါပဲဖြစ်သော ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းသောက်သုံးနိုင်ပါသည်။ ဗိုက်နာခြင်းဖြစ်ပါကDexchlorpheniramineအားအစာသို့မဟုတ် နွားနို့နှင့် ရောသောက်ပါ။
ကြာရှည်အာနိသင်ရှိသောဆေးပြားများကိုသုံးမည်ဆိုပါကမချေရ ဝါးမစားရပါ။ ထိုသို့လုပ်မိပါကဆေးများကိုတစ်ပြိုက်နက် ထွက်သွားစေပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများသွားစေနိုင်ပါသည်။ ထို့အတူ ကြာရှည်အာနိသင်ရှိဆေးပြားများကို ဆရာဝန်မှ မညွှန်ကြားပဲခွဲခြမ်းခြင်းမလုပ်ရပါ။ ဆေးပြားတစ်ခုလုံးသို့မဟုတ် အခြမ်းကိုမချေရ မဝါးရပါ။
ဆေးအရည်ပုံစံဖြင့် သောက်သုံးမည်ဆိုပါကဆေးချိန်သည့်ပစ္စည်းကိုသေချာသုံးပါ။ အိမ်သုံးဇွန်းအားဆေးချိန်ရန်မသုံးရပါ။ ဆေးပမာဏမမှန်နိုင်ပါ။ ဆေးပမာဏသည် ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား၊ သင်၏အသက်အရွယ်၊ ရောဂါအခြေအနေနှင့် ကုသမှုအားတုန့်ပြန်မှုအပေါ်မူတည်ပါသည်။ ဆရာဝန်ခွင့်မပြုပဲ Dexchlorpheniramineအား ပမာဏတိုးခြင်း သို့မဟုတ် အကြိမ်ရေပိုသောက်ခြင်း မလုပ်ပါနှင့်။ ဆေးအာနိသင် ကောင်းကောင်းရစေရန် မှန်မှန်သောက်ပါ။ ဆေးသောက်ဖို့ မှတ်မိနိုင်ရန် နေ့စဉ်တူညီသောအချိန်၌ သောက်ပါ။
အခြေအနေများမပျောက်လျှင် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာလျှင် ဆရာဝန်ကိုအကြောင်းကြားပါ။
Dexchlorpheniramine (ဒက်စ်ကလိုဖီနိုင်းရမင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
[ယေဘူယျ အသိပေးချက် – ဆေးအများစုမှာအခန်းအပူချိန်တွင် သိုလှောင်ထားနိုင်ပါတယ်]
Dexchlorpheniramineကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့်စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့်ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုများမဖြစ်စေရန်Dexchlorpheniramineကိုရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးတွေမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Dexchlorpheniramineဆေးအမျိုးအစားနှင့်ဆေးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းသောပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသောသိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးသို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာတွင်ထားပါ။)
Dexchlorpheniramineအားအိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ရေထွက်ပေါက်များမှဆေးချတာမျိုးအားမလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကိုမလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့်အခါများတွင်စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ရာအရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
Dexchlorpheniramine (ဒက်စ်ကလိုဖီနိုင်းရမင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
တစ်ချို့သောကျန်းမာရေးအခြေအနေများသည် Dexchlorpheniramineဆေးပြားများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုရှိနိုင်သည်။ သင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ဆရာဝန် သို့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကိုပြောပါ။ အထူးသဖြင့်-
• သင့်၌ကိုယ်ဝန်ရှိလျှင် သို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နို့တိုက်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိလျှင်
• ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည့်ဆေးရောမညွှန်ကြားသည့်ဆေးများကိုသုံးစွဲနေလျှင်၊ ဗီတာမင်များ၊ အာဟာရဖြည့်စွက်စာများ၊ အပင်ထွက်ပရဆေးများကိုသုံးနေလျှင် သို့ သုံးရန်အစီအစဉ်ရှိလျှင်
• ဆေးများအစာများသို့မဟုတ် တခြားအရာများနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုရှိလျှင်
• နှလုံးခုန်နှုန်း နှေးခြင်း မြန်ခြင်းပုံမှမဟုတ်ခြင်း ဖြစ်လျှင်
• ပန်းနာရင်ကြပ်၊ အဆုတ်ပြဿနာ (ဥပမာ Emphysema)၊ နှလုံးပြဿနာ၊ သွေးတိုး၊ ဆီးချို၊ နှလုံးသွေးကြောပြဿနာ၊ လေဖြတ်၊ ရေတိမ်၊ အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းပိတ်ခြင်း၊ အနာ၊ ဆီးအိမ်ပိတ်ခြင်း၊ ဆီးသွားရခက်ခြင်း၊ ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်း၊ အတက်ရောဂါ သို့မဟုတ် သိုင်းရွိုက်ဂလင်းအလွန်တက်ကြွခြင်းတို့ရှိလျှင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Dexchlorpheniramine (ဒက်စ်ကလိုဖီနိုင်းရမင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် B ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။]
Dexchlorpheniramine (ဒက်စ်ကလိုဖီနိုင်းရမင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Dexchlorpheniramine: controlled-release tablets, ဆေးရည်
အဖြစ်များဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာလျှင် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာလျှင် ဆရာဝန်နှင့် စစ်ဆေးပါ။ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ ငိုက်မျဉ်ခြင်း၊ အာခြောက်ခြင်း၊ နှာခေါင်းသို့ လည်ချောင်းခြောက်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှာခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ အားနည်းခြင်း။
Dexchlorpheniramineသုံးနေစဉ် ပြင်းထန်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်လာပါကဆေးကုသမှုခံယူပါ။
ပြင်းထန်သည့် ဓါတ်မတည့်မှုလက္ခဏာများဖြစ်သော အကွက်ထခြင်း၊ အင်ပျဉ်ထခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်း၊ ရင်ကြပ်ခြင်း၊ ပါးစပ် မျက်နှာ နှုတ်ခမ်းသို့ လျှာတွင် ဖူးယောင်ခြင်းများဖြစ်လျှင်၊ ဆီးသွားရခက်ခြင်း၊ ဆီးမသွားနိုင်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်နှုန်ုးမြန်ခြင်းမူမမှန်ခြင်း၊ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ ပြင်းထန်စွာခေါင်းမူးခြင်း၊ မူးမောမေ့လဲချင်သလိုဖြစ်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ လက်တုန်ခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ အမြင်ပြောင်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်လာလျှင် ဆေးကုသမှုခံယူပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Dexchlorpheniramine (ဒက်စ်ကလိုဖီနိုင်းရမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
(ယေဘူယျအသိပေးချက် – Dexchlorpheniramineသည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့်တခြားသောဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သော ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများ မဖြစ်လာစေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံး၏စာရင်းကိုပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်သည့်အခါဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနှင့်။)
ဤဆေးနှင့်ဓါတ်ပြုနိုင်သောတစ်ချို့ဆေးများမှာ antihistamine အရေပြားလိမ်းဆေးများ(ဥပမာ diphenhydramineခရမ်၊ လိမ်းဆေး၊ စပရေး), antispasmodics (e.g., atropine, belladonna alkaloids), MAO inhibitors (isocarboxazid, linezolid, methylene blue, moclobemide, phenelzine, procarbazine, rasagiline, selegiline, tranylcypromine), Parkinson’s disease အတွက် ဆေးများ(e.g., anticholinergics such as benztropine, trihexyphenidyl), scopolamine, tricyclic antidepressants (e.g., amitriptyline).
ငိုက်မျဉ်းစေတတ်သောဆေးများဖြစ်သည့် antihistamines (e.g., diphenhydramine), anti-seizure drugs (e.g., carbamazepine), medicine for sleep or anxiety (e.g., alprazolam, diazepam, zolpidem), muscle relaxants, narcotic pain relievers (e.g., codeine), psychiatric medicines (e.g., chlorpromazine, risperidone, amitriptyline, trazodone) များသုံးနေလျှင် ဆရာဝန် သို့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကိုပြောပါ။ ဆေးများအားလုံး၏ လေဘယ်များကိုသေချာဖတ်ပါ။ ဆေးများတွင် ငိုက်မျဉ်းစေတတ်သည့်ပစ္စည်းများ ပါနိုင်ပါသည်။ ဤဆေးထုတ်ကုန်များအားစိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကိုသေချာမေးမြန်းပါ။ Dexchlorpheniramineသည် Chlorpheniramine နှင့် အတော်လေးဆင်တူပါသည်။ Dexchlorpheniramineပါသောဆေးများသုံးနေလျှင် Chlorpheniramineပါသောဆေးကိုမသုံးရပါ။
Dexchlorpheniramineသည် တစ်ချို့သောဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများအား နှောက်ယှက်နိုင်ပါသည်။ (ဥပမာအရေပြားအလက်ဂျီစစ်ဆေးခြင်း) ထို့ကြောင့် အဖြေအမှားများထွက်လာနိုင်သည်။ သင်ဒီဆေးကိုသုံးနေကြောင့် သင့်ဆရာဝန်နှင့် ဓါတ်ခွဲခန်းဝန်ထမ်းများကို ပြောပြပါ။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Dexchlorpheniramine (ဒက်စ်ကလိုဖီနိုင်းရမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Dexchlorpheniramineက အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့်ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Dexchlorpheniramine (ဒက်စ်ကလိုဖီနိုင်းရမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Dexchlorpheniramineသည်သင်၏နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားပိုဆိုးသွားစေခြင်းသို့မဟုတ်ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီး၏။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Dexchlorpheniramine (ဒက်စ်ကလိုဖီနိုင်းရမင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အလက်ဂျီအတွက် လူကြီးသုံးရန် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
အလက်ဂျီကြောင့် နှာစေးခြင်းအတွက် လူကြီးသုံးရန် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
ကလေးတွေအတွက် Dexchlorpheniramine (ဒက်စ်ကလိုဖီနိုင်းရမင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အလက်ဂျီအတွက် ကလေးသုံးရန် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
၂ မှ ၅ နှစ်: 0.5 mg (1/4 teaspoonful) every4to6hours for children2to5years old (do not use timed release)
၆ မှ ၁၁ နှစ်: 1 mg (1/2 teaspoonful) every4to6hours, or4mg of the timed-release preparation at bedtime
အလက်ဂျီကြောင့် နှာစေးခြင်းအတွက် ကလေးသုံးရန် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
Dexchlorpheniramine (ဒက်စ်ကလိုဖီနိုင်းရမင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Dexchlorpheniramineကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
16 floz (473 mL).
အရေးပေါ်အခြေအနေသို့မဟုတ် ဆေးပမာဏလွန်သွားသည့်အခြေအနေများတွင်အရေးပေါ်ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသမှုခံယူပါ။
Dexchlorpheniramineကိုသောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမည့်အချိန်နှင့်နီးကပ်နေပြီဆိုပါကလွတ်သွားသောအကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်၌ပင်သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအားနှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနှင့်။